Ngabe u-Ahmad uvulela uMotsepe indlela kwiCAF?
UPATRICE Motsepe umengameli weMamelodi Sundowns okuphakanyiswe igama lakhe ukuthi ahole iCAF. Isithombe: Samuel Shivambu/BackpagePix
Zakhele Xaba | November 25, 2020
KUNGENZEKA kube yikhubalo lenhlanhla kuPatrice Motsepe ukugudluzwa kukamengameli weConfederation of African Football (CAF), u-Ahmad Ahmad, odingisiwe iminyaka emihlanu ebholeni.
Ekuqaleni kwesonto inhlangano eyengamele ibhola lomhlaba, iFifa, imemezele ukuthi iyamdingisa u-Ahmad emuva kokutholakala ephule imigomo yi-Ethics Committee. Emacaleni abekwe wona aqale ukuphenywa ngawo selokhu angena esikhundleni ngo-2017, kukhona awokuphatha imali budlabha, ukugwaza nokugwazisa, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engafanele nokungathembeki. Ngaphezu kokudingiswa ukuthi angazihlanganisi nebhola, u-Ahmad uhlawuliswe u-R3.3 million.
“Uphenyo oluthinta umnumzane Ahmad ngokuziphatha kwakhe njengomengameli weCAF phakathi kuka-2017-2019 beluthinta ukuphathwa kwezindaba zeCAF, okukhona nokuxhasa uhambo i-Umrah oluya eMecca, ukuthinteka kwakhe odabeni lwenkampani eyakha izimpahla zezemidlalo.
Esinqumeni (seFifa Ethics Committee) okufinyelelwe kuso, kuvelile ukuthi wenze ukungethembeki enikezana ngezipho nezinye izinzuzo, waphatha kabi imali okungahambisani nemigomo yeFifa yokuziphatha,” kusho isitatimende seFifa.
Ukudingiswa kuka-Ahmad kusho ukuthi ngeke esakwazi ukungenela ukhetho lokwengamela iCAF oluzoba ngonyaka ozayo ngoMashi 12 eMorocco. Lokhu kunika isiqiniseko sokuthi iCAF izoba nomengameli omusha. Isikhundla sesizobangwa nguMotsepe ongumengameli weMamelodi Sundowns, Jacques Anouma wase-Ivory Coast, Augustin Senghor waseSenegal no-Ahmed Yahya oyinhloko kasoseshini waseMauritania. U-Ahmad kwakuvele ukuthi wesekwe ngososeshini abawu-46 ukuthi abuye angenele ukhetho.
Ngesikhathi umengameli weSouth African Football Association (Safa), uDanny Jordaan, ememezela ukuthi baphakamise igama likaMotsepe ekungeneleni ukhetho, wathi bafuna ibhola lase-Afrika likhule ngokuthi likwazi ukuheha osomabhizinisi ekufakeni imali kunobhutshuzwayo ezwenikazi.
UMotsepe ngomunye wosozigidi nosomabhizinisi abahlonishwayo emhlabeni. UJordaan usanda kutshela eminye imithombo yezindaba ukuthi sebelinde ukuthi ikomiti leFifa elibhekelele ukuziphatha liphasise igama likaMotsepe. Uma selenze njalo, kuzosho ukungena ngokusemthethweni ohlwini lwabazongenela ukhetho, bazobe sebeqhamuka nohlelo lokukhankasa. UMotsepe akakaze aphawule ngokuphakanyiswa kwegama lakhe.
Ngesikhathi uJordaan ethumela izimfanelo zokungenela kukaMotsepe kwiCaf emasontweni edlule, wathola ukwesekwa kusoseshini waseBotswana, Nigeria, Zimbabwe nowaseSierra Leone. Izincwadi zokweseka uMotsepe zingaphezu kwezintathu ezidingekayo eziwumgomo kwabangenelayo.
Umengameli weCaf uzongena elindelwe ukulungisa okuningi okukhalwa ngakho okukhona indaba yamalungelo okusakaza kwithelevishini imidlalo yamaqembu esizwe neyeCaf Champions League neyeCaf Confederation Cup.